Siligaoma mitsako: loza mitatao ho an'ny alikanao | Alika Manerantany
El siligaoma Izy io dia iray amin'ireo fitsaboana ampiasain'ny olombelona, ​​nefa iray amin'ireo mampidi-doza indrindra ho an'ny alikantsika. Mampalahelo fa ny tsy fahampian'ny fahalalam-pomba dia midika fa afaka mahita izany vatomamy izany eo am-pelatanan'izy ireo mandritra ny diany tsirairay, mandry amin'ny tany an-dalambe. Zava-dehibe ny fisakanantsika azy ireo tsy hiditra ao aminy noho ny antony voalaza etsy ambany.
Voalohany indrindra, tsy maintsy fantarintsika fa ny ankamaroan'ny siligaoma sy vatomamy tsy misy siramamy dia misy akora antsoina hoe xylitol, zava-mamy artifisialy izay ampiasaina ho solon'ny siramamy, ary misy koa amin'ny vokatra fanaova-mofo sasany. Io dia poizina mahery amin'ny saka sy alika, ary mety hiteraka tsy fahatapahan'ny aty aza. Ary ny fihinanana azy io dia miteraka famoahana insuline mahery amin'ny vatana, izay mitarika fihenan'ny haavon'ny glucose ao anaty ra.
Ity iray ity hypoglycemia Mitranga eo anelanelan'ny 30 sy 60 minitra aorian'ny fihinana azy io, ary manimba ny atiny tokoa. Mitranga izany raha toa ka mihoatra ny 0,5 g isaky ny kilao amin'ny lanjan'ny vatana ny habetsaky ny xylitol izay lanina. Ny fambara famantarana ny fahamamoana toy izany dia ny fandoavana, ny fanintona, ny havizanana, ny fangovitana, ny fahaverezan'ny fandrindrana, ary amin'ny tranga mavesatra, tsy fahombiazan'ny aty.
Raha mahita ny iray amin'ireo famantarana ireo isika dia tsy maintsy mandeha any amin'ny tobim-pahasalamana veterinera avy hatrany. Eo ny manam-pahaizana tsy maintsy mandroa mandoa ao amin'ny alika hanesorana xylitol amin'ny vatany. Indraindray dia ilaina koa ny mampiditra infusions gliokra intravenous, miankina amin'ny habetsaky ny lanin'ny biby. Raha atao haingana ny fitsaboana dia mety hamaly amin'ny vokatra tsara ilay alika.
Na eo aza izany rehetra izany dia mitera-doza ihany koa ny siligaoma, ary izany no izy mety ho voabahana ao amin'ny rindrin'ny tsinay na ao amin'ny esofagus, miteraka rendrika ao anaty can. Indraindray ny fanafody dia ampy hamongorana ireo sisa tavela ireo, na dia amin'ny tranga hafa aza dia ilaina ny manatrika fandidiana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fahano alika sy alika kely » Siligaoma mitsako: loza mitatao ho an'ny alikanao
Mihodina ny alikako alohan'ny hatory: fa maninona?